Banijya News | माछापुच्छ्रे बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्दै, कति पाइन्छ ब्याज ? - Banijya News माछापुच्छ्रे बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्दै, कति पाइन्छ ब्याज ? - Banijya News
माछापुच्छ्रे बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्दै, कति पाइन्छ ब्याज ?
माछापुच्छ्रे बैंकले असार ३१ गतेबाट साउन ४ गतेसम्म ऋणपत्र जारी गर्न भएको छ। बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यका ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेको हो।
बैंकले निष्काशन गर्ने ३० लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये सर्वसाधारणमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख कित्ता र बाँकी १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको १८ लाख कित्ता बैंकले व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गर्नेछ। सर्वसाधारणका लागि जारी हुने १२ लाख युनिटमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता डिबेन्चर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । ११ लाख ४० हजार इकाईमा सर्वसाधारणले खरीद गर्न पाउनेछन् ।
२०८७ सालमा परिपक्व हुने ऋणपत्रको वार्षिक ब्याज दर साढे ८ प्रतिशत छ। ब्याज प्रत्येक ६/६ महिनामा भुक्तानी हुने छ। लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम ५ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्।
ऋणपत्र निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले बैंकलाई न्यून कर्जा जोखिम जनाउने ‘इक्राएनपी आईआर सिङ्गल ए माइनस एटदरेट’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। बैंकले यसअघि २०८५ सालमा परिपक्व हुने ऋणपत्र जारी गरेको थियो। ३ अर्बको त्यो ऋणपत्रको ब्याज दर १०.२५ प्रतिशत छ।